Nhau - Nei bronze ichishandiswa pakuveza
Chishongo chendarira chine nguva yakareba chinogona kuchengetwa uye kuchengetwa zviri nani kwemazana emakore. Kuenzaniswa nezvimwe zvidhori, mifananidzo yendarira inewo nhoroondo yakare, handizvo here? Isu tinoziva kuikanda bronze chifananidzo chinogona kugadzirwa kuve mufananidzo, mhuka nezvimwe chimiro, nekuda kweminiti uye zvakakosha ruzivo rwezvinodiwa. Saka muvezi wemifananidzo anozosarudza ichi chifananidzo chebronze pakugadzira chinyorwa chendarira chechizvinozvino.
Iri mifananidzo yemazuva ano yekuveza inogona kuve yakagadzirwa nendarira, fiberglass, isina tsvina, corten simbi nezvimwe zvinhu. Isu tinokwanisa zvinoenderana nezvinodiwa zvako kuti uite zvicherwa, asi tinodawo kusevha nzvimbo dzekugadzira kana nzvimbo dzekushandisa kukurudzira zvinhu zvakanaka kune vatengi vedu.
Tine anopfuura makore gumi nematatu ekuverengera ruzivo rwekuveza, saka sei usinga batane nesu kana uchida kuva neuyu, ndatenda! Yakasarudzika simbi yekushongedza mifananidzo yakanaka kwazvo uye chero ruvara rwunowanikwa kwatiri kana iwe uchitizivisa zvaunoda. Nei usingatauri nekukurumidza, Tenda!
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD.is iri muXiamen City, Fujian Province, China.Takaita mhando dzese dzesimbi zvivezwa nemifananidzo kweanopfuura makore gumi. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira makuru ekunze ekunze, kucherwa kwegadheni, paki yekuvezwa, chifananidzo cheguta nezvimwe.
Isu tinosarudza nharaunda-inoshamwaridza zvinhu sezvakakosha zvinhu, senge isina simbi, bronze, fiberglass material.Ivo akanaka kushongedza kwekunze nekunze. Saka inoshandiswa zvakanyanya mundima yedu yekugadzira mifananidzo.
Isu tinotenda kuti tinokwanisa kupa zvakanakisa mutengo uye yepamusoro mhando yezvigadzirwa zvevatengi vedu, uye musarudze isu muchawana iyo yakanaka. Ndapota taura nesu sepazasi, ndatenda!